समाचार - नयाँ उत्पादन रिलीज - रिचार्जेबल ब्याट्री फ्यान9इन्च
अहिले चीनमा मात्रै नभई अन्य मुलुकमा समेत विद्युतीय सीमितताको अवस्था आएको छ र विश्वभर विद्युतको अभाव छ । हामी (Kennede Electronics MFG CO LTD)
हाम्रो नयाँ मोडेल KN-L2819, 7.4V3600mAh लिथियम ब्याट्री सहितको9इन्चको रिचार्जेबल ब्याट्री फ्यानमा तपाईको रोजाइको लागि3स्पीड, स्वचालित बायाँ र दायाँ 40° हेड फंक्शन, पारिवारिक प्रयोगको लागि सजिलो छ। र रातको बत्तीमा 12pcs एलईडी छ, बच्चा र आमाबाबुको प्रयोगको लागि धेरै सुविधाजनक छ।
यो नयाँ उत्पादन को विशेषताहरु:
4 IN 1 शक्तिशाली वायु सर्कुलेटर फ्यान: परम्परागत फ्यानहरू भन्दा फरक, अपग्रेड टर्बो टेक्नोलोजीले कूलिङ फ्यानलाई सर्पिल हावा सिर्जना गर्छ जसले कोठाभरि हावा घुमाउँछ। यो फ्यान मात्र होइन, एलईडी बत्ती भएको लालटेन पनि हो। तपाईं यसलाई रातको बत्तीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डेस्क फ्यानमा3समायोज्य हावा छ। चिसो रहन पंखाको नजिकै बस्नु पर्दैन, चिसो हावाले तपाईंलाई कोठाको हरेक कुनामा सहज महसुस गराउँछ। तपाइँको भान्छामा भित्ता माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
शयनकक्षको लागि अल्ट्रा शान्त फ्यान: शीर्ष एयरफ्लोको साथ, यो कम्प्याक्ट टेबल फ्यानले तपाईंको सबै आवश्यकताहरू पूर्ण रूपमा पूरा गर्न सक्छ। DC प्रविधिद्वारा सञ्चालित, बिजुलीको फ्यान असाधारण रूपमा शान्त छ र कोठालाई शान्त रूपमा चिसो पार्न कुशल छ ताकि तपाईं आरामसँग सुत्न सक्नुहुन्छ। शोरको स्तर 25dB जति कम छ, यो शयनकक्ष, बच्चाहरूको कोठा र कार्यालयहरूको लागि उपयुक्त बनाउँदै बडबड गर्ने नाला वा हल्का कानाफूसीको बराबर छ। यो शान्त फ्यान थोरै सुत्ने, बुढाबुढी र बच्चाहरूको लागि उपयुक्त छ, तपाईंलाई मीठो सपना देख्न दिनुहोस्।
DC प्रविधि र ऊर्जा कुशल: यो मौन प्रशंसक सुपर ऊर्जा कुशल छ! यो डेस्क फ्यानले सबैभन्दा उन्नत DC मोटर छान्छ जसको स्पष्ट फाइदाहरू ऊर्जा कुशल, शान्त र लामो सेवा जीवन हो। बिजुली खपत मात्र 3-24W हो, यसको मतलब 330 घण्टा निरन्तर प्रयोग (न्यूनतम सेटिङ) को लागि मात्र 1 kWh आवश्यक छ, जसले AC मोटर फ्यानहरूको तुलनामा 80% बिजुली बचत गर्न सक्छ! साथै, एयर कन्डिसनरको साथ यो कुलिङ फ्यान प्रयोग गर्नुहोस्, यसले एयर कन्डिसनरको 80% दक्षता बढाउनेछ!
सम्पूर्ण कोठा सर्कुलेटर फ्यान: 3D दोलन प्रकार्यको साथ, यो दोलन फ्यानले 80° तेर्सो (स्वत:) र 120° ठाडो रूपमा (म्यानुअल) स्विङ गर्न सक्छ, 30m² कोठामा मानिसहरूलाई चिसो पार्न पर्याप्त शक्तिशाली, कोठामा सबै हावाको पूर्ण परिसंचरण प्रदान गर्दछ। अद्वितीय काठ अन्न, सरल स्ट्रिमलाइन डिजाइन। डिस्सेम्बल र सफा गर्न सजिलो। हामी ब्रान्ड प्रत्यक्ष-बिक्री बिक्रेता हौं, प्रभावकारी रूपमा 24 घण्टामा तपाईंको सन्देशको जवाफ दिनुहोस्, आजीवन अनुकूल ग्राहक सेवा र समर्थन।
पोस्ट समय: अक्टोबर-12-2021